Cadaawaddii Manchester United & Leeds United Oo Durba
Horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League waxa uu xili ciyaareedka dambe yeelan doonaa xiise ka badan intii hore, waxaana xafiiltankii hore ugu dhexeeyey kooxaha waaweyn ee kaalmaha sare isku baacsanaya kusoo korodhay naadi kale oo laf dhuun-gashay ku ah Manchester United.
Red Devils oo qaybtii dambe ee xili ciyaareedkan isbeddel weyn ku dhacay, diyaarna u ah in fasal ciyaareedka dambe ay Manchester City, Liverpool iyo Chelsea oo si weyn isku dhisaysa ay kula tartanto horyaalka Premier League, waxa kale oo kusoo fool leh kulamo xaasaasi ah oo xataa kaga daran kuwa naadiyadan kale.
Habeenkii xalay ayay xaqiiqsatay kooxda heerka labaad ee Leeds United inay dib ugu soo laabatay horyaalka Premier League oo ay ka maqnayd muddo 16 sannadood ah, waxaana hoggaaminaya tababaraha caanka ah ee Marcelo Bielsa oo bilaabaya in kooxdiisa uu u diyaariyo sidii ay Premier League wacdaro uga dhigi lahayd.
Sheffield United oo xili ciyaareedkan kusoo biirtay horyaalka Premier League kaddib markii ay kasoo dallacday heerka labaad ee Championship-ka, waxay hiigsi u tahay Leeds United oo sidoo kale doonaysa inay qaabka Wolves u shaqayso xili ciyaareedka horeb.
Sannadkii 2004 oo ahayd markii ugu dambaysay ee Leeds United ay ka ciyaarto Premier League, waxa duullaan ku qaadday Manchester United oo ka iibsatay ciyaartoydii waaweynaa sida Rio Ferdinand iyo Alan Smith hal sano ku kala dambeeyey LUFC, laakiin waxa xataa ay Red Devils kasoo qafaalatay Leeds United halyeygoodii Eric Cantona oo sannadkii 1992kii kusoo biiray Red Devils.
Xafiiltanka ka dhexeeya labadan kooxood waxa uu salka ku hayay tartanka labada magaalo ee Leeds iyo Manchester ee ay labadan kooxood ka kala dhisan yihiin, kuwaas oo qarniyadii 18aad iyo 19aad ahaa meelihii uu koboca dhaqaalaha ee Britain ka bilaabmay, gaar ahaan warshadaha. Dhaqaalaha Leeds ayaa si xawli ah u kordhay, waxaana xuddun u ahaa warshadaha looxa.
Inkasta oo Liverpool ay tahay kooxda xafiiltanka koowaad kala dhaxeeyo Manchester United, haddana Leeds United ayaa ugu soo xigta, waxaana hirdankoodu dib ugu noqdaa qarniyo hore iyo sidii ay labadooda magaalo u tartamayeen.
Habeenkii xalay ayey cadaawadda Manchester United iyo Leeds United dib u bilaabantay markii ay LUFC usoo dallacday Premier League, waxaana ficilkii ugu horreeyey sameeyey weeraryahanka reer England ee Marcus Rashford oo si degdeg ah u masaxay farriin hambalyo ahayd oo uu u diray Leeds United markii lagu dhawaaqay inay horyaalka Premier League usoo dallacday.
“Ka taageere United ahaan, waxaan ku faraxsanahay inaan arko Leeds United oo kusoo laabanaysa Premier League oo ah halkii ay iska lahaayeen. Hambalyo.” Ayuu bartiisa bulshada ee Twitterka u qoray Marcus Rashford, laakiin daqiiqado kooban kaddib ayuu masaxay.
Rashford waxa ficilka uu sameeyey uu qabsaday baraha bulshada oo si aad ah ay taageereyaasha labada kooxood ugaga falceliyeen.
Leeds United markii ay xili ciyaareedkii 2003/04 ka dhacday Premier League, waxay u degtay heerka labaad oo ay usii dhaaftay heerka saddexaad, waxaanay ku qaadatay inay mar kale kusoo laabato Premier League muddo 14 sannadood ah.